erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသင်ချရမသွားပါစေပါနဲ့။ Psychotherapist Nuala မင် (2017) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသင်ချရမသွားပါစေပါနဲ့။ Psychotherapist Nuala မင် (2017)
ရှာရုန်နီ Chonchuir အားဖြင့်သောကြာနေ့, ဧပြီ 28, 2017,
အမျိုးသား ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဟာ Erectile disfunction ဖြစ်နေတာကြောင့်အထူးကုဆရာဝန်တွေကအမျိုးသားတွေကိုအကူအညီတောင်းခံပြီးကုသမှုအမြောက်အများကိုရရှိနိုင်ကြတယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ရှာရုန် ni Chonchuir ။
ERECTILE ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ဆိုပေးထားအချိန်တွင် 10 လူတဦးတည်းသာသက်ရောက်သည်။ အိုငျးရစျနှလုံးသားဖောင်ဒေးရှင်း 18 မှ 50 အသက်ယောက်ျား၏ 59% အဆိုအရ 38 ကျော်အသက်ယောက်ျား၏% 60 နှင့် 69 နှင့် 57 နှစ်ကြားယောက်ျား၏ 70% အခြေအနေကိုခံစားနေကြရသည်။
"ဒါဟာတစ်ဘုံပြဿနာရဲ့အကတကယ်လူများအတွက်အိုမင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သဘာဝနှင့်မျှော်မှန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့" ဟုဒေါက်တာ Ivor Cullen က, တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Waterford မှာအတိုင်ပင်ခံဆီးရောဂါပါရဂူကပြောပါတယ်။
မြို့၌လိင်အပေါ် Charlotte နှင့် trey ရဲ့ storyline နောက်တော်သို့လိုက်သူမည်သူမဆိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ED ဆက်ဆံဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့တွေအများကြီးရှိသေး၏။
အကောင်းဆုံးလူသိများနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာ Viagra ကိုခေါ်အနည်းငယ်အပြာဆေးလုံးနှငျ့အတူရှိ၏။
"ဒါဟာသူတို့နှစ်လယ်ပိုင်း 5s တွင်အွန်လိုင်းသို့ရောက်လာသောအခါရှုခင်းတော်လှန်ခြင်းရာ PDE1990 inhibitors ကိုခေါ်လေးခုကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တဦးတည်းရဲ့" ဟုဒေါက်တာ Cullen ကပြောလိုက်ပါတယ်။
ဟောင်းများခရစ်ကတ်မှ Ian Botham ကွင်းကိုချွတ်, ကတဦးတည်းကိုနှစ်သက်သူတို့ရဲ့ trysts သူတို့အိပ်ရာကိုဖဲ့ဒါကြောင့်လုံ့လရှိသူခဲ့ကြသည်ဟုဆိုကာအတူခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ထုတ်ပေးသောသူ၏လိင်အသက်ရှိ၏, ထို 1980s အတွက်ပုရစ်အစေးကြီးစိုးပေမယ့်။
အဆိုပါ 61 နှစ်အရွယ် erectile ပြဿနာများကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်အဘို့အကုသမှုကိုလက်ခံရရှိအကြောင်းကိုပြောသောအခါမျက်ခုံးထမြောက်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။
သို့သော်သူက Viagra သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပြားအဘို့အရွေးချယ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သူဟာအိုင်ယာလန်အတွက်အသစ်ရရှိနိုင်သည့်အနိမ့်-ပြင်းထန်မှု Shockwave ကုသမှု (စာရင်း), တစ်ဦးသင်တန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာသူသည်ဤကုသမှုကို ရွေးချယ်. အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းရှိသည်ဖို့နှင့်သုံးပတ်အတွင်းမြင်နိုင်ရလဒ်များကိုပြသနိုင်ဖို့ဆိုပါတယ်။
Urology ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်ထဲမှာ 2015 လေ့လာမှုအရသုတေသီများကဆေးဝါးမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းတို့စာရင်း၏ထက်ဝက်အပတ်စဉ်ဆေးများနှင့်အခြားတစ်ဝက်တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာပေးတဲ့သူ 112 ယောက်ျားယူခဲ့ပါတယ်။
ကုသမှု၏အဆုံးအသုံးပြုပုံစာရင်းခဲ့သောသူတို့၏အမျိုးအ 57% ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုလက်ခံရရှိသူမြား၏ 9% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအလားအလာရလဒ်များကိုနေသော်လည်း, ဒေါက်တာ Cullen ကကြောင်းစာရင်းအံ့ဖွယ်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုယ်စားပြုနိဂုံးချုပ်ဆန့်ကျင်ကသတိပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွား% 40 မှတက်အတွက်မ ED ဆီးချို, ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ်တင်ပါးဆုံတွင်းကျိုး၏ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်လျှင်, အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
ရုံထိုနည်းတူ, Viagra နှင့် PDE5 inhibitors တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်း-အားလုံးမဟုတ်ပါ။
Viagra ထိုကဲ့သို့သောနှာခေါင်းလှောင်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ရင်ပူအဖြစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါကသာရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ် ED ၏အကြောင်းရင်းများကိုကုသဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, အခြေခံအကြောင်းရင်းပိုဆိုးလာနိုင်ပြီး Viagra အတူတူပင်တပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ED မကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Viagra ဟာထောက်ပံ့ရေး restore ကဲ့သို့မှိန်ဖျော့သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လိင်တံပတျဝနျးကငျြသွေးကြောကျဉ်းနေလျှင်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကအခြားသွေးကြောလည်းရှိပါတယ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ Viagra သို့မဟုတ်စာရင်း၏အကြိုက်မညွှန်ကြားခြင်းအားဖြင့်, ဆရာဝန်တွေမူလတန်းပြဿနာလျစ်လျူရှုနိုင်ပါသည်။
"ဒီလိင်တံဟာနှလုံးပေါ်မှာပြတင်းပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်သည်လိင်တံနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်နိုင်ပါတယ်" ဟုဒေါက်တာ Cullen ကပြောလိုက်ပါတယ်။
"ပညာရေးကိုလည်းဆီးချို, ဆီးကျိတ်ပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်မကျဆေး Antidepressants အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်များကလူနာများကိုအကဲဖြတ်ကြသောအခါ, ငါတို့ ED ရုံတစျခုလက္ခဏာဖြစ်သောမဆိုယခင်က undiagnosed ပြဿနာတွေရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုမေးခွန်းတွေမေးနှင့်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကို run ဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့က ED ပြုမူဆက်ဆံရှေ့မှာပြဿနာထို့နောက်ကုသခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ "
အဆိုပါ manopause (သို့မဟုတ်အထီးသွေးဆုံး) အရမ်း ED အတွက်ကစားရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါ။
အမျိုးသမီးဟော်မုန်းအနိမ့်လိင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့, အလယ်တန်းအသက်အရွယ်ပြောင်းလဲဒါကြောင့်လည်းတူညီသောရလာဒ်များအများကြီးနဲ့အတူအမျိုးသားများတွင်ကျဆင်းမှု testosterone နိုငျသကဲ့သို့။
ဤသည် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးယောက်ျားရဲ့စိုက်ထူတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Cullen ကသည်အခြားကုသမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါဤလုပ်ငန်း, မမြင်စဖူး။
"အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တိုးတက်အောင် ED တိုးတက်စေခြင်းနှင့် Viagra-type အမျိုးအစားဆေးဝါးများသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မြှင့်တင်ရန်နိုငျကွောငျးတည်ပြီးသတ်တယ်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။
"အသက်ကြီးလူကြီးများ၏ 79% 50 ထုတ်ဝေနေတဲ့ပြောင်းခြင်းအိုင်ယာလန်လေ့လာမှုအတွက်ကျော် 2014s အဆိုအရအဝလွန်နေကြတယ်" ဟု Orla Walsh က, Dublin အာဟာရရေးစင်တာနဲ့ dietician ကပြောပါတယ်။
"အဝလွန်အမျိုးသားများဟာသူတို့ရဲ့သွေးကြောပျက်စီးနေကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်ကြောင့် ED ထံမှခံရဖို့ပိုများပါတယ်။ "
ဤသည်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ခြားနားချက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ Walsh, တစ်ရက်လေ့ကျင့်ခန်း၏ 30 မိနစ်ယူပြီးဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အတန်အသင့်သောက်သုံးအကြံပြုသည်။
"အခြေခံအားဖြင့်, နှလုံးအတှကျအကောငျးတကြောင်းဘာမှလိင်တံအဘို့ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
"ဒါကြောင့်ပဲ, ပဲစေ့တွေဟာပဲဟင်း, သံလွင်ဆီ, ငါးနှင့် walnuts နှင့်ဘရာဇီးအခွံမာသီးများကဲ့သို့အခွံမာသီးနဲ့တူသောအရာတို့ကိုထည့်ပါ။ "
သူမသည်အထူးသဖြင့် beetroot ဖျော်ရည်အကြံပြုသည်။
"ဒါဟာ dilate ဖို့နှင့်အသွေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစီးဆင်းရန်အသွေးကြောကိုကူညီပေးသောနိုက်ထရိတ်အပြည့်အဝမယ့်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အထိ 20% ခုနှစ်, ED အကြံပေးခြင်းကိုကူညီနိုငျဆိုလိုတာကတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကနေအဓိကအားထား။
Nuala သမင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးနှင့် psychosexual ကုထုံးသည်နှင့် ED သူမရင်ဆိုင်အသုံးအများဆုံးကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါမိတ်ဖက်, အမျက်ထွက်စိတ်ဆိုးသို့မဟုတ်မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးလျှင် "ဒါဟာကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ သာလူကိုအပြစ်ရှိကြောင်းသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။ "
သမင်ကိုလည်း၎င်းတို့၏ 20s အတွက်လုလင်တစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်ကိုဆကျဆံတယျ။ ၎င်းတို့၏ပြဿနာများကိုမတူကြသော်လည်း, သူတို့သည်သူမ၏အဟောင်းတွေ clients များနှင့်အတူဘုံထဲမှာတွေအများကြီးရှိသည်လုပ်ပါ။
"သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနှင့် Self-လေးစားမှုထိခိုက်နစ်နာနေကြတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
"သူတို့ကမကြာခဏသူတို့ကကူညီပေးခဲ့မရနိုင်ယုံ, သူတို့ကုထုံးရောက်လာပြီအချိန်မှာကူကယ်ရာမဲ့ခံစားရတယ်။ သို့သော်အားလုံးနီးပါးကိစ္စများတွင်, ကုထုံးကူညီပေးသည်။ "
"စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအားလုံးအချက်များနေကြတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
"စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်အများအပြားယောက်ျားလည်းဖော်ပြထားခြင်းတစ်ခုခုပါပဲ။ သူတို့ကိုတခြားလူတိုင်းအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောလိင်ဆက်ဆံကြပြီးမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမလုံလောက်နေကြောင်းယုံကြည်ဖို့ကိုလှည့်ပတ်မီဒီယာအတွက်လိင်၏ပမာဏနှင့်အတူကလွယ်ကူပါသည်။ "
"လုလင်အများကြီး porn မှတဆင့်ထက်သာမန်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိနှငျ့ရငျးနှီးကာမဂုဏ်ကြားဆက်ဆံရေးမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြ" ဟုသူမကပြောပါတယ်။
အဆိုပါအော်ဂဇင် - - ထက်ကာမဂုဏ်အပျော်အပါးအပေါ် "သူတို့ကအဆုံးရလဒ်တခုတခုအပေါ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ fixation ရှိသည်ဖို့သင်ယူပါပွီ။ ဤသည်ကြီးမားသောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ "
"သူတို့ကယုံကြည်မှုနှင့်နားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ရှိသည်နှင့်သူတို့အာရုံငါးပါးပျော်ရွှင်မှုအပေါ် focussing ဖွငျ့ဤလုပ်ပါ။ သူတို့သည်နောက်တဖန်အပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဆီသို့ဦးတည်တက်အလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ယူပါ။ "
သူတို့ဤသို့ပြုနေစဉ်, သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကုထုံးအစည်းအဝေးများအတွက် Self-လေးစားမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်။
"ဒါဟာသူတို့ကိုနောက်ခံကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်ကသူတို့ခံစားရပုံကိုသာသက်ရောက်သည်, သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းတို့၏နွေးထွေးမှုအဆင့်ဆင့်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုတိုးတက်စေမထားဘူး။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ "
မှ Ian Botham ယောက်ျားတစ်ဦးမျက်နှာသာပွုပါပွီမှပေါ်လာသည်။ ပညာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းအတွက်ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်အများဆုံးလူတို့သညျအတှေ့အကွုံဖြစ်ပြီးသေးသေးမညီကြောင်းဘာသာရပ်ပါပဲ။
Viagra ဟာအကောင်းဆုံး-လူသိများကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်မှ Ian Botham ရဲ့ပုံပြင်ပြပွဲအဖြစ်ကတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ကအစားအစာသို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲ psychosexual ကုထုံးသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြားဝင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
"ကုသ၏အကွာအဝေးလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တိုးချဲ့ကျနော်တို့ရှိသည်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာသည်တိုးတက်မှု၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်း" ဟုဒေါက်တာ Cullen ကပြောလိုက်ပါတယ်။
"အဲဒီမှာနားလည်မှုနှင့်အရှက်တစ်မရှိခြင်းဒီခေါင်းစဉ်န်းကျင်ရဲ့ဒါပေမယ့်ယောက်ျားအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်များကမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကကူညီပေးခဲ့သည်လိမျ့မညျ။ "
1. Viagra လေး PDE5 inhibitor ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးဆေးလုံး form မှာယူနေကြပါတယ်။
တချို့က - Viagra နဲ့တူ - အခြားသူများအနိမ့်ဆေးများအတွက်ပုံမှန်ယူနေကြစဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီတစ်နာရီမှတက်ယူနေကြသည်။
Viagra အကြီးအကျယ်ရေတိုသက်တမ်းအတွင်းလိင်တံဖို့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွါးသော်လည်း, အနိမ့်ထိုး option ကိုရေရှည်မှာစိုက်ထူ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းမှတစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားစေပါသည်။
2. စာရင်းဆရာဝန်များကလိင်တံတလျှောက်တွင်ငါးမှတ်ရန် 1,500 လှုပ်ကယ်နှုတ်တော်မူတစ်ခု ultrasound စုံစမ်းစစ်ဆေးကိုအသုံးတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးလေးပတ်၏သင်တန်းကျော်အစည်းအဝေးများ 12 မှလေးခုကျော်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ ဒါဟာလိင်တံအသစ်သွေးကြောများ၏ကြီးထွားမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
3. ထိုးဆေးကုထုံး Prostaglands လုပ်လိုက်တာတိုက်ရိုက်လိင်တံထဲသို့ထိုးသွင်းခံရလို့ချေါတဲ့မူးယစ်ဆေးပါဝငျသညျ။ သူတို့ကငါး 10 ဖို့မိနစ်အတွင်းထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
4. ဒါဟာတူညီတဲ့မူးယစ်ဆေးကိုလည်း urethra သို့တောင့်ထည့်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်လိင်တံ၏အဆုံးပေါ်သို့တစ်ဦးမုန့် massaging အားဖြင့်ယူနိုင်ပါတယ်။
"အဲဒီ options နှစ်ခုစလုံးမှအားနည်းချက်များရှိပါတယ်" ဟုဒေါက်တာ Cullen ကပြောလိုက်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါတောင့်နှင့်အတူ, ရေပိုက်၏အဆုံးအနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နှင့်မုန့်နှင့်အတူ, သင်ပါးစပ်လိင်ရှိသည်သို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးမသုံးနိုင်တယ်။ "
5. ခွဲစိတ်သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကအမြဲတမ်း Prosthesis လိင်တံထဲသို့ထညျ့နိုငျသညျ။ အဘယ်အရာကိုမျှပြင်ပမှမြင်နိုင်သည်။ ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူမတိုင်မီသကဲ့သို့ခက်ခဲများနှင့်အထိခိုက်မခံသည်နှင့်ထိုလူထှတျအထိပျအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
6. တစ်ဦးပျော့ implants တစ်ခုသို့မဟုတ်လေဟာနယ်ကိရိယာ၏ non-ထိုးဖောက် option ကိုပတျသကျတဲ့လျော့နည်းရှုပ်ထွေး option ကိုရှိပါတယ်။
"ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာဖိအားစသောအသွေးကိုဆွဲယူပြီးကျပ်လက်စွပ်ထို့နောက်ထိုအသှေးကိုစုပ်ယူထားသောဘယ်မှာလေဟာနယ်ပြွန်ထဲသို့ထည့်သွင်းထားကြောင်းလိင်တံကပါဝငျ" ဟုဒေါက်တာ Cullen ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူပုံမှန်စိုက်ထူဖို့ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းတချို့လူနာတွေကအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ "